I-Skrill - enye indlela eya kwi-Paypal - Geofumadas
I-Skrill - enye indlela eya kwi-Paypal
NgoNovemba, 2018 Internet kunye neBlogs
Ukuhamba phambili kwezobuchwepheshe kuye kwavumela abantu ukuba banxibelelane ukusuka naphi na, kwaye ngokutsho kwezakhono zabo okanye imisebenzi yabo inokwenzeka ukuba banikeze zonke iintlobo zeenkonzo kwiiplatifti ezifana ndiyakuthanda, Workana okanye Fiver, ezidibeneyo ngokufumana kunye nokuthumela iintlawulo ngeendlela ezahlukeneyo. Eli nqaku liza kuchaza indlela ezimbini zeentlawulo ezithumelayo kunye nokufumana iiplatifomu zomsebenzi, ezihambelana namaphepha ewebhu. freelancer, ukukwazi ukufumana iingenelo kunye nokungahambi.
I-Paypal, yenye yeziqhwala ngokulandelelana kweenkqubo zokuhlawula (ukuthumela nokufumana imali yecomputer), isetyenziswa kakhulu kunoma yiluphi uhlobo lokuthengiselana okanye kwicandelo lezoqoqosho, kwaye ukuthandwa kwalo kuye kwanda ukubonga ngokuphindaphinda bafunwa Ehlabathini lonke, yamkelwe njengeendlela zokuhlawula phantse kuwo onke amazwe namashishini.
Skrill siyavela eyenye PayPal kunyaka 2001, eyayisaziwa ngokuba MoneyBookers, yinto elula kakhulu ukuba ukusebenzisa eqongeni, esibonakalayo ubuhlobo ngokupheleleyo kwaye akavumeli umsebenzisi kuphoswa kwiphepha izama ukufumana ezinye umsebenzi. Ukuba akukho asetyenziswa rhoqo PC ungalayisha isicelo mobile phone free ngokupheleleyo, kunye nokufikelela kuyo yonke imisebenzi njengoko kwi website kuya kuba.
Ukuze kukwazeke ukwenza uthelekiso phakathi kweendlela ezimbini intlawulo, sichaza imeko apho ufumene isicelo yomsebenzi yeprojekthi kwingingqi Geographic Information Systems, ngokukodwa, ukudalwa iimephu eziliqela eziqulathe ulwazi ukuqhubekekiswa imifanekiso yesathelayithi kunye nengxelo yokuhlalutya nganye yemveliso; obunokubakho kumakhi yale projekthi ibonelela isixa USD $ 2.000,00, ukuba ifakwe kwi-akhawunti ye kumaqonga zengqesho wezifanekiso kunye neenjongo zokhuseleko block intlawulo, ngoko ukugqiba umsebenzi ngokwanelisayo, imali umqeshwa, ngubani na oya kuba iinketho eziliqela umhlala-phantsi, kwaye kwisithuba apho Ungasebenzisa PayPal kunye Skrill abakhululwa.
Ukuthelekiswa kwamapulatifomu ngokubhekiselele kwimeko yokucinga
Kwi-PayPal: Ukuyila i akhawunti kulula kwaye inkqubo simahla, ingxaki esizibonakalisa ngetshekhi, ukuze i-akhawunti luqinisekisiwe kufuneka ezinxulumene ikhadi lamatyala ukuba awunayo, PayPal inika imida ye ukusetyenziswa kwe-akhawunti kunye nezixa ukuhoxiswa kokubili kwenyanga kunye nonyaka. Le nkqubo ihlala ithatha i-24 kwiiyure ze-48. Ukongeza, kukho ezinye izithintelo, ixhasa kuphela 20 iintlobo zemali yaye ngokutsho kwindawo apho sadalwa-akhawunti, imirhumo abafani, ukuba usuka country're ohambahambayo awukwazi ukutshintsha idilesi yakho, uqaphele ukuba kukho abathile imiqobo kunye neekomishini zokusetyenziswa kwilizwe ngalinye.
Kwi Skrill: ukudala i-akhawunti ilula nje kwaye ikhululekile, ukuqinisekiswa akudingi ukudibana nekhadi lesikweletu, kodwa ukufumana inkokhelo yenkonzo kunye nokuchongwa, le nkqubo ithatha iiyure ze-24 okanye ngaphantsi. Unokuvula i-akhawunti kunaliphi na ilizwe, kuba livuma iindidi ze-40 zeemali, ngoko akukho mingalo yokusetyenziswa, ngokubhekiselele kwindawo.
Unako ukongeza ii-akhawunti amaninzi zebhanki kwi iimali ezifunekayo, ezo ke kunjalo PayPal evumela kuphela i-akhawunti yakho kunye namashishini, kwakhona ungatshintsha intsalela criptomonedas akhawunti (bitcoin imali, bitcoin, ethereum i-classic, i-Ethereum, i-Litecoin ne-0x) kwisixhobo esifanayo seSkrill.
Iikhomishini kunye neerhafu
Kwi-PayPal: Neekhomishini abasakwazi phezulu, njengoko komzekelo ukubala oku kulandelayo: xa umthengi ufuna ukuthumela 2.000 $ intlawulo isebenza iibhokisi ngalinye 5,14% + 0,30 $, okt 108,3 $, umntu iyonke uya kufumana 1.891,7 $. Ukuba ufuna ukufumana isixa-mali, umntu kufuneka athumele i-2.114,48 ukuze athole i-2.000 $.
Njengoko mali lekhomishini ziphezulu kakhulu, umqeshwa kufuneka ukhethe ukuba imali yonke imali bomsebenzi; ngokuba xa iintlawulo inxenye yenziwa, ixesha ngalinye le nkqubo yagqitywa le Izinga 5,14 0.30 + $ iya kuhlawuliswa. Le ntlawulo kwakhona olutshintsha-tshintsha ngayo ilizwe imvelaphi (umzekelo, ukuba uthumele iintlawulo Brazil intlawulo yi $ 7.4 0,50% +).
Ukuba, ufuna ukuguqulwa kwemali ngexesha lokufumana okanye inkqubo yokuthumela, i-3,5% ngaphezulu ihlawuliswa kwisixa.
I-PayPal isebenza phantsi kweengcamango ezibini, (imali enemali kunye nemali epheleleyo), ngoko kufuneka uqwalasele umehluko phakathi kwabo, xa uvuma ukuthumela nokufumana imali. Imali net yenye oza xa umbhambathiswa luthatha iikhomishini (kule meko mali net yi 2.114,48, kangangokuba lufikelela umsebenzi ithuba 2.000 $ elizeleyo), imali iyonke, sifunyenwe ngaphandle neekhomishini cover yekontraka I-PayPal ithetha ukuba umqeshwa ufumana i-1.891,7 $ ngokupheleleyo.
Kwi Skrill: Iintlawulo ngokufumana nemali null oko 0%, oko kukuthi, lo Umzekelo, ukuba umqeshi nomqeshwa isigqibo ukusebenzisa le ndlela yentlawulo, umqeshwa uya kufumana $ 2.000 kakuhle ngaphandle ekunciphiseni mali yeMisebenzi. Kwimeko isivumelwano, ipesenteji khomishini 1,45%, oko kukuthi, umbhambathiswa kufuneka ufake ngaphezu $ 29 intlawulo yakho, eya kuba $ 85,48 ngaphandle kokuba Commission PayPal.
Ukuba ufuna ukufaka imali kwi:
ukudluliselwa kwebhanki 0%
Bitcoin, neteller, Klarna, Paysafe cash, Trustlv: i-1% ikhomishini
Ikhadi lesikweleti i-American Express, i-Diners, i-Master card, iVISA, ikhadi le-paysafe: I-1% ikhomishini
Ukurhoxisa iikomishoni kukuba:
IiYurophu: i-5,50 euro
I-Swift: i-5,50 euro
Ukuba ufuna ukuguqula imali efunyenwe kwenye i-currency, ikhomishini ye-3,99 ihlawulwe ngokwemali.
Con Skrill Kunokwenzeka ukuba ube nekhadi lokubhadela, elinikezwe xa ixabiso le-akhawunti lidlula i-3000 $, xa kwenzeka oko kuba lilungu le-VIP (uBronze, iSiliva, iGold okanye i-Diamond). Imali yesicelo sakho i-euro ye-10 kwaye ikhutshwe phakathi kwe-24 ukuya kwii-48 iiyure, ufumana ubuninzi kwiintsuku ze-7 zeentsuku. Iikhomishini zokutshintshiselana ngemali zi-2,49% kubasebenzisi abaqhelekileyo, kubaxhasi be-VIP yi-1,75%.
Iintlawulo zokusetyenziswa eli khadi null, yaye ukuba lirhoxe-ATM ukuba une lobhedu akhawunti 1,90%, ukuba client VIP Silver, Golden okanye Diamond akukho ikhomishini ipesenti ukurhoxiswa, lo umda udaba I-900 $ ukuya kwi-5000 $ kuye ngohlobo lwe-akhawunti. Kulungele abo bathengayo nge-intanethi.
Skrill, ethatha inyathelo phambili, kunye ekungeneni ukuthenga nokuthengisa criptomonedas, imirhumo iyohluka, kuxhomekeke lwemali onayo kwi-akhawunti yakho, umzekelo, ukuba akhawunti mali zeerandi okanye euro ufuna ukuyitshintshela criptomonedas, iKomishoni ukuthenga okanye ukuthengiswa 1,50% ezinye iimali khomishini 3% ikhuthaza ukusetyenziswa kungcakazo, ngoko le ndlela intlawulo yamkelwe phantse zonke iibhukumeyikha kunye yaku-intanethi.
Kwi-PayPal: Le akhawunti iphezulu kakhulu, ukuba kukho nayiphi na impazamo yaye ikontraki ngemali yentlawulo, uthumele imali komnye umntu okanye kwicala elingelilo, ungabona ukuba imali iphelile kwaye isicelo hlawuleka evela kwinkampani. Enye imeko kukuba, ukuba i-PayPal iyakrokrela ukuba ukunyakaza kwe-akhawunti kungeniso engekho mthethweni ukuvala i-akhawunti. Kwaye kamva ivula inkqubo yophando kwaye ikhulule imali kuze kufikelelwe imvelaphi.
Kwi Skrill: Igcina ipolisi yokungabelani ngolwazi lwabaxumi balo kunye nabarhwebi, ngapha nangapha kukhuselekile, ukususela xa uhlawula, i-imeyile kunye nephasiwedi kuphela kuyadingeka. Ukuze alondoloze akhawunti olukhuselekileyo, njengoko ingeniso evela PC okanye app mobile, ungenza factor-ezimbini ungqinisiso, nto leyo elenza ikhowudi nge Google se ukufikelela kuyo nayiphi na indawo okanye isixhobo ngokukhuselekileyo. Kukho neprogram yokubuyiselwa kwemali kubo bonke abo bathengi abasebenzisa inkqubo yesibini yokunyaniseka kwenkqubo yokuqinisekisa.
Ukuxhaswa kwabathengi kwiilwimi ze-12 kudlula imingcele, njengokuba iiyure zakho ze-24 zeeyure zoshishino kwiintsuku ze-7 zeveki.
Njengoko kungabonwa, ngamnye umntu unobuncedo kunye nokungahambi kakuhle kokusetyenziswa, kukufikelela kumsebenzisi ukuchaza injongo yeakhawunti yakhe, kwaye ukusuka apho ukugqiba ukuba yeyiphi iimeko ezifanelekileyo ezifanelekileyo kwiimfuno zakhe, kwimeko Skrill yinto efanelekileyo kulabo abasemhlabeni we-freelancer kwaye bafuna ukuhlawula rhoqo, ngoko kuphepha ukunciphisa inzuzo evela kwii-commissions nakuba kungathandwa njengokuba ukukhula kwayo kwiminyaka yamuva kuye kwanyuswa. I-PayPal iya kuqhubeka ibe yindlela eyaziwayo kakhulu, izuze ngaphezu kweminyaka, ukuthembela kwabathengi bayo, nangona kunjalo, umcimbi weekomishoni unokuba lukhulu kakhulu kubasebenzisi abathile.
Post edlulileyo«Edlulileyo Impembelelo yenguqu ukusuka kwi-ArcMap ukuya kwi-ArcGIS Pro